उर्जा/सिंचाई Archives | Page3of4| Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - नेपालका सिमेन्ट उद्योगमा तातो हावाबाट विद्युत् उत्पादन गरिँदै - page 3
१८ भदौ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वर बुहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुने गरी मात्रै अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाको उपभोगअनुसार लागत भार हुनेगरी डिपिआर तयार गर्न निर्देशन दिएको गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
१३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूर तथा मध्यमश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विकासमा कायापलट ल्याउने आयोजना पञ्चेश्वर र महाकालीको एक महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर आउने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “ती दुई परियोजनाका डिपिआरका अतिरिक्त ती क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह, प्राविधिक शिक्षालय बन्दैछ ।” गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा प्रशंसा संरक्षण समूहद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयन गरी यसको सर्वस्वीकार्यतामा आफूले जोड दिएको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
ऊर्जामन्त्रीले दिए १० दिने अल्टिमेटम
१२ भदौ, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले झोलामा अनुमतिपत्र बोकेर विद्युत्को व्यापार गर्नेको अनुमतिपत्र खारेज गरिने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर बाँकेद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारतबाट आयात गरेर विद्युत् बाँड्ने काम मात्र मन्त्रालयले नगर्ने स्पष्ट पार्दै नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढाउन गृहकार्यसमेत थालिएको जानकारी दिए । मन्त्री शाहीले नेपालमा बिजुली उत्पादनका लागि अहिले नेपाली र विदेशी व्यक्ति तथा कम्पनी खोलाको अनुमतिपत्र लिएर झोले व्यापार गर्दै हिँडिरहेकाले अब त्यसखाले कार्यलाई तत्काल अङ्कुश लगाइने उल्लेख गरे ।	थप पढ्नुहोस्
११ भदौ, काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तले कम्पनीले फुकोट कर्णाली ४२६ मेगावाट, जगदुल्ला ३०७ मेगावाट, किमाथांका अरुण ४५० मेगावाट, भेरी एक जलाशय ६१७ मेगावाट, बेतन कर्णाली ६८८ मेगावाट र नलगाड ४१० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिए । ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई हजार ८९८ मेगावाट रहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
२३ साउन, काठमाडौं । अझै कति समय लाग्छ, तपाईहरु किन सरकारलाई पटक–पटक अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्छ ? होइन सर, हामी काम गर्दै छौँ । अबको दुई महिनामा गुणात्मक परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । तपाईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को स्थलगत भ्रमणको क्रममा समेत यही भन्नुभएको थियो ? किन पूरा भएन काम ? परिस्थिति त्यस्तै आइप¥यो हजुर अब त्यस्तो हुन्न । हामी समयमा नै काम सक्छौँ ।	थप पढ्नुहोस्
२२ साउन, काठमाडौं । जिल्लाको सदरमुकामसहित मुसिकोट नगरपालिकामा सञ्चालित विद्युत् सेवा एक सातादेखि बन्द भएको छ । केन्द्रीय लाइनको सल्यानमा र जिल्लाको स्यार्पुदह साना जलविद्युत् योजनाको पावरहाउसमा रहेको मेसिनमा खराबी आएपछि गत आइतबारदेखि विद्युत् सेवा बन्द भएको हो । विद्युत् सेवा बन्द भएपछि जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका कामकाजमा समस्या भएको छ भने जनजीवन प्रभावित बनेको छ । विद्युत् नभएका कारण जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता वितरण तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा दैनिक कामकाज प्रभावित भनेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेरबहादुर पुनले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
६ साउन,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने गरी सहजीकरण गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।	थप पढ्नुहोस्